मकहाँ आओ र म तिमीलाई विश्राम दिनेछु | रेमा साहित्य वितरकहरू
प्रभुले मात्र होइन, उहाँको पक्षमा, दयालुपूर्वक हामीलाई आउन आग्रह गर्नुहुन्छ; तर हामी, हाम्रो पक्षमा, हामीले बोकेका भारी बोझहरूका कारणले गर्दा आउन अत्यन्तै आवश्यक छ। हाम्रो अद्वितीय रूपले चिन्ताको युग हो - प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा चिन्ता, रोग र महामारीबाट हुने चिन्ता र यसको परिणामस्वरूप अस्तव्यस्तता, आतंकवादको त्रासबाट चिन्ता, अनिश्चित अर्थव्यवस्थामाथिको चिन्ता। यदि हामी कार्यरत रहिरहन सक्दछौं भने हामी आश्चर्यचकित हुन्छौं। यदि हामीसित पर्याप्त भोजन र औषधि हुन्छ भने हामी आश्चर्यचकित हुन्छौं । हाम्रा बच्चाहरूले कस्तो प्रकारको संसारलाई उत्तराधिकार गर्नेछन् भनेर हामी आश्चर्यचकित हुन्छौं। ओह, हामी कसरी आउने र आफूस्वयमलाई अति धेरै बोझ र चिन्ताबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ!
पापको समस्याको कारणले गर्दा हामी पनि आउन अत्यन्तै आवश्यक छ। हामीलाई थाहा छ कि यस ब्रह्माण्डमा एक पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, र हामी निष्पक्ष र नैतिक जीवन जिउन सक्छौं। तर हामीसँग समस्या छ - हामी त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैनौं। हामी सबैले परमेश्वरको बिरूद्ध पाप गरेका छौं र मानिस विरुद्ध अनगिन्ती पाप गरेका छौं। त्यसोभए हामी कसरी आउन सक्छौं? येशूमा आउन हामीलाई के कुराको खाँचो पर्दछ?
एक शब्दमा - केही पनि पर्दैन! येशूले पूर्णतय कुनै पनि कुराहरू माग गर्नुहुन्न, किनकि उहाँले हामीकहाँ आउनको लागि अघि नै पूर्ण प्रावधान गरिसक्नुभएको छ। बाइबलले भन्दछ कि, "हामी सबै भेडाझैं बरालिएका छौं; हामी हरेक आ-आफ्नै बाटोतिर लागेका छौं; र प्रभुले उहाँ [येशू] माथि हामी सबैको अधर्म राखिदिनुभएको छ" (यशैया ५३:६)। हामीलाई कुनै पनि कुराको आवश्यक पर्दैन किनकि उहाँले हाम्रा पापहरूको लागि पूर्ण दण्ड भोग्नुभयो। अब हामीले हाम्रा पापहरूको दण्ड भोग्नुपर्दैन किनभने येशूले आफ्नो रगत बगाउनुभएर यो सबै हाम्रो लागि बेहोर्नुभयो! उहाँले ऋण तिर्नुभयो, त्यसैले जब हामी आउँछौं, हामी हाम्रा पापहरू क्षमा हुनेछ भनी विश्वस्त हुन सक्छौं। उहाँ फेरि मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो र जीवन-दिने आत्मा बन्नुभयो (१ कोरिन्थी १५:४५) ताकि उहाँ हामीभित्र आउन सक्नुहुनेछ र हाम्रो भित्रिय शान्ति र विश्राम बन्नुहुनेछ।
प्रभु येशूले असल कामहरूको माग गर्नुहुन्न; उहाँले असल चरित्रको निम्ति माग गर्नुहुन्न; उहाँले योग्यताको प्रमाण माग्नुहुन्न - उहाँले केवल "आओ" भन्नुहुन्छ। अनि जो कोही आउँछ, उहाँले शर्तबिनाको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ: "जो मकहाँ आउँछ, उसलाई म कुनै रीतिले त्याग्नेछैन" (यूहन्ना ६:३७)। हामीले अब गर्नुपर्ने सबै कुरा उहाँमा आयो। अनि आओ भनेको यसको अर्थ के हो? आओ भनेको अर्थ प्रभुको नजिक आउनु हो। आउनु भनेको उहाँलाई पुकार्नु हो। आउनु भनेको उहाँमा विश्वास गर्नु र उहाँलाई ग्रहण गर्नु हो।
प्रभु तपाईंको आगमनको लागि पर्खिरहनुभएको छ जस्तो तपाईं अहिलेको क्षणमा हुनुहुन्छ। तपाईंको वर्तमान पापसित आउनुहोस्। तपाईंको वर्तमान डरसाथ आउनुहोस्। तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै आउनुहोस्। स्वयमलाई सुधार्न नकुर्नुहोस् - त्यो दिन कहिल्यै आउँदैन। येशू हाम्रो सट्टामा मर्नुभयो हाम्रा सबै कमीहरू पूरा गर्नुभयो। पर्खनु खाँचो छैन - केवल आउनुहोस्। यदि तपाईं आउनुहुन्छ, यदि तपाईंले येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ, यदि तपाईंले आफ्नो हृदय खोल्नुभयो र उहाँलाई पुकार्नुभयो भने, उहाँले तपाईंलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। उहाँको प्रतिज्ञा सदासर्वदाको लागि पक्का छ - "जो मकहाँ आउँछ उसलाई म कुनै रीतिले त्यग्नछैन ।" केवल आउनुहोस्।
"प्रभु येशू, म पापी हुँ भनेर स्वीकार गर्दछु। मलाई डर र शङ्का लागेको छ भनेर म स्वीकार गर्दछु, तर अब म तपाईंकहाँ आउँछु। म तपाईंलाई भन्दछु कि मेरो पापबाट मलाई तपाईंको बहुमूल्य रगतले सफा पार्नुहोस्, र म तपाईंको यो प्रतिज्ञामा विश्वास गर्दछु कि तपाईंले कुनै रीतिले त्यग्नुहुनेछैन। म जस्तो छु, म तपाईं कहाँ आउँछु, अनि मलाई थाहा छ कि तपाईंको वचनद्वारा तपाईंले मलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ। म तपाईंलाई भन्दछु मभित्र आउनुहोस्। प्रभु येशू, म भर्खरै आएको हुँ कि तपाईं मेरो विश्राम हुन सक्नुहोस्।"